Enagás, inika imiqondiso yokuqala yealam | Ezezimali
Enagás, inika imiqondiso yokuqala yealam
Kubonakala ngathi buxoki ngeli xesha lonyaka, kodwa enye yezona ndawo zibonakala zimbi okwangoku yinkampani yegesi yesizwe i-Enagás. Ukuya kwinqanaba lokuba ihambe ngexeshana elifutshane kakhulu ukusuka kwimeko yokunyuka simahla ukuya ekubeni likhuseleko eliyingozi kakhulu lokuthatha isikhundla kwiimarike zezabelo. Ngenxa yokuba umba wobugcisa iye yawohloka ngokuphawulekayo kwiinyanga ezidlulileyo. Ngengcebiso yokuthengisa yinxalenye enkulu yabahlalutyi bezemali.
Apho ime khona kuba igqithile kwezinye zezona nkxaso zibalulekileyo ibinazo ngaphambili ukuseta ixabiso lakho lesabelo. Emva kokufikelela kumaqondo aphezulu ngawo onke amaxesha kwinxalenye yokugqibela yonyaka ophelileyo nakwiinyanga zokuqala zika-2019. abathengi. Ukumangaliswa yinxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Kodwa imeko yakhe ayisasebenzi njengoko ibinjalo kwiinyanga nje ezimbalwa, kodwa ngokuphandle ibonisa imbonakalo ewohlokileyo kunangaphambili. Kuphela kukwenza imisebenzi ethile Kwiimarike zezabelo ingakumbi ezo zijolise kwelona gama lifutshane ngokubhekisele ekusisigxina kwabo. Phakathi kwezinye izizathu, kuba ngokungalindelekanga ibe yenye yezona zinto zixabisekileyo kwisalathiso semarike yestokhwe saseSpain, i-Ibex 35. Ngumahluko omkhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona nto ilunge kakhulu ekuhambeni kweentelekelelo indalo.
1 Enagás, iindlela ezahlukeneyo zeshishini
2 Kwimeko embi kunokuba i-electrics
3 Ukuphuculwa okumodareyithi kwezibonelelo
Enagás, iindlela ezahlukeneyo zeshishini
Enye yezinto ethe ekugqibeleni yachaphazela ixabiso lamandla esizwe uninzi lwezivumelwano ezifikelele kuzo kwiinyanga ezidlulileyo. Kwaye nangayiphi na imeko, khange bathande inxenye enkulu yeearhente zezemali. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba kubhlukanisile abatyali zimali abancinci nabaphakathi kwixabiso lentengiso yesitokhwe. Ukuphendula, ngubani oza kuyithetha, kwezinye izindululo kwizabelo zaseSpain ezithathwa njenge ikhuseleke ngakumbi ukukhusela inkunzi ekhoyo kutyalo-mali.
Ukusuka kule ndawo yokujonga, ayisixabiso elinomdla ukuba ube ngumxholo ukuthengwa okukhethiweyo, kanye njengoko kwenzekileyo kwinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Ukuba akunjalo, yinto edwelisiweyo enemingcipheko emininzi ekusebenzeni okuvulekileyo kwezi zihlandlo zichanekileyo. Apho unokuninzi okungaphezulu kokulahleka kunokuba uphumelele ngoku. Ngaphandle kwenyani yokuba isenokuba nesakhono sokuphinda siqwalasele into enokuthi ithathelwe ingqalelo njengeluncedo kakhulu ngabanye babahlalutyi kwiimarike zezabelo ezaziwa kakhulu. Nangona isigqibo sokugqibela ekugqibeleni sixhomekeke kuwe.
Kwimeko embi kunokuba i-electrics
Nangona bekwimakethi efanayo yemasheya, kunokuthiwa ngaphandle koloyiko lwempazamo ukuba lelinye lamaxabiso amabi ngaphakathi icandelo lezamandla. Ngaphandle kokwazi ngokuqinisekileyo zithini iinkcazo zokufikelela kule meko ithambileyo. Ingakumbi kuba wayejongeka emhle kakhulu kwiinyanga zokuqala zalo nyaka. Apho yayithengisa ngaphezulu kwama-25 euros ngesabelo ngasinye kunye nengqikelelo ukuze ibenendawo eziphezulu kakhulu. Mhlawumbi ngaphezulu kwamanqanaba ebenayo malunga nee-euro ezingama-30 kwaye oko bekuya kuyinyusa iye kumanqanaba aphezulu kwaye inomdla omkhulu kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ngoku zonke ezi zinto ziqikelelweyo zirhoxisiwe kwaye zonke iindlela zotyalo-mali ziyadlula yokukhusela izikhundla kwiimarike zezabelo. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Apho imeko ngokubanzi iyenye into eyahlukileyo, imeko esezantsi kwii-indices eziphambili zesitokhwe, kuzwelonke nangaphandle kwemida yethu.
Kwaye kunzima kakhulu ukwenza imali enenzuzo kunangaphambili. Ngomngcipheko ofihlakeleyo onokuphazamisa intshukumo kwiimarike zezemali. Oku kuyinyani evelayo kweli xabiso kwaye enyanisweni ayilunganga okwangoku. Ayothusi into yokuba unokuba nayo hamba phezulu kakhulu ezantsi kwaye yintoni enokubangela ukuba ushiye i-euro eninzi apha endleleni. Ngaphezulu kokuba uzimisele ukuthwala kwasekuqaleni Ukuya kwinqanaba lokulinganisa eli xabiso kunye nezo zinoburharha ezidweliswe kwimarike yesizwe eqhubekayo. Ngayo yonke into ebonisa le meko inobungozi. Ngokwehla kwexabiso lokujikeleza amanani aphindwe kabini athetha kakhulu ngeli xesha lonyaka.
Ukuphuculwa okumodareyithi kwezibonelelo
U-Enagás ufumene inzuzo emva kwerhafu (BDI) ye-2019 yezigidi ze-euro kwikota yokuqala ye-103,9. Eli nani I-0,2% iphezulu kunexesha elifanayo lonyaka yangaphambili. Apho kubonakala khona ukuba iziphumo ezibhalisiweyo kwikota yokuqala yowama-2019 zihambelana neenjongo ezimiselwe unyaka wonke kwaye ubukhulu becala zibangelwa kukusebenza kakuhle kwegalelo leenkampani ezityala imali, nezime kwindalo esingqongileyo. Ipesenti ye-BDI, kunye nolawulo olupheleleyo lwendleko zokusebenza nezemali.
Ngokubhekisele kwimfuno yegesi, kufuneka iqinisekiswe kule meko ukuba ukusetyenziswa kwerhasi yendalo eSpain kunyuke nge-2,4% kwikota yokuqala xa kuthelekiswa nelo xesha linye lonyaka ophelileyo. Imfuno yemizi-mveliso, ebanga malunga ne-55% yemfuno iyonke yerhasi yendalo kwikota yokuqala, iyaqhubeka nokudaleka kwayo okuhle kwaye ikhule nge-4,9%. Ngamanye amagama, ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, ibango lilonke legesi yendalo likhula nge-3,9% kwaye ukonyuka kwemfuno yecandelo lezemveliso limi kwi-4,4%. Iziphumo ezingenakuthi zithathelwe ingqalelo njengezingalunganga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Enagás, inika imiqondiso yokuqala yealam
Iiresiphi zokuphepha ukuthengisa ixabiso